Home Wararka Qorsho Khater ah oo ay Siyaabo kala Duwan ugu Lug Leeyihiin Farmajo,...
Qorsho Khater ah oo ay Siyaabo kala Duwan ugu Lug Leeyihiin Farmajo, RW Rooble iyo Beesha Caalamka.
Farmajo iyo kooxdiisa la taliyayaasha u ah ayaa go’aansaday inaysan dalka wax doorasho ah ka dhigin ilaa Febraayo 2022, waxkasta oo doorasho keeni karana uu Meesha ka saaro isagoo kaashana beesha Caalamka oo ka warwaregeysa inay soo fasaxaan lacagihii doorashada lagu qaban lahaa oo ay hore u ballanqaadeen iyo Rooble oo taas marmar siiyo ka dhigana, iskuna qaaboojiyey lacagihii murshaxiinta Senetarada laga qaaday qeyb ka mid.
Beesha caalamka haddii aan ku horreyno waxay la soo taagan yihiin waa inay bixiyaan lacagaha bilowga doorashada Wasaaradda Maaliyadda oo lagu daray lacagihii laga qabtay senetarrada oo ah $20,000 qof walba oo sanater murashax u noqday ha helo ama ha waayee kursigee.
Arrintaas waxay si dedban ugu kaalmeyneysaa Farmajo iyo Kooxdiisa oo wata qorsho ah inaan marnaba doorashada golaha shacbiga iyo tan madaxweynaha la qaban oo is jiijiidka la gaarsiiyo 2022 Febraayo.
Shirkaas waxaa lagu go’aamiyey in RW Rooble marna lagu adkeeyo, marna lala furo wadahadal iyadoo la isticmaalayo waxkasta oo ka shaqeynaya agtiisa haddii ay lacag tahay iyo haddii wax kale tahayba.
Wuxuuna waqti badan ku lumiyey NISA iyo IKraan oo haddiiba doorasho la qabto si sahal loo soo gole joojin lahaa cidkasta oo ka masuul ah.
Farmajo waxaa uu kooxdiisa kual ballamay laba arrimood:
In shacbiga la jahawareeriyo oo maalinba meel buuq laga furo sida Gedo, Guriceel iyo Balatweyne oo kooxihii ciidan ahaan loo diinwaan geliyey ee maleyshiyaadka gaarka ahaa loo daabulo, iyadoo lagu adeeganayo caruurta xilka iyo xiddigaha la culus yihiin ee Odawaa iyo Farxaan Qaroole.
In beesha caalamka ay kooxda Farmajo oo ay qaar kamid ah hoosta kala shaqeynayaa loo sheego inaan doorasho la bilaabeyn ilaa ay lacagta soo wada shubaan, iyadoo beesha caalamka lafteeda dan ku qabta arrintaan si qaskaan uu dalka ugu sii jiro oo lacago badan ugu qaataan xaaladda cakiran darted.Taasina ay keeni doonto sida Afaganistaan looga dhaqaaqay Somaliya looga dhaqaaqo.
In RW Rooble loo sheego ama lagu cabsiiyo haddii uusan fahmeyn in uusan doorashada bilaabin ilaa beesha caalamka ay lacagta soo wada shubto, haddii kale uu ku ceebabayo inuu dhameystiri waayey doorashadii uu ballanqaaday.
In Maxamed Mursal iyo guddoonka golaha shacbiga uu kala heshiiyey Farmajo inuu awoodda u soo celin doono, hadii ay u ogolaadaan waxa uu rabo inay
In marka la gaaro Febraayo 2022, uu Farmajo golihii hore ee shacbiga oo lagu daray senetka cusub uu fadhiisiyo, una sheego sheego inuu talada u soo celiyey, kadiban ay ku dhaqaaqaan qorshihii uu kala heshiiyey Mursal iyo Guddoonka Golaha Shacbiga.
Haddaba xaaladda dalka maanta intaas ayey mareysaa Mucaaridka oo iskadaba raaraca ma yaqaannaan meel ay u socdaan, waxaana maalin walba ka sii lumaya ixtiraamkii loo hayayey oo ay ku kasabadeen markii ay hiil ka heleen ciidankii Badbaado qaran oo aan xitaa la ogeyn maanta meel uu ku sugan yahay.
Isku soo duub, waxaa muuqata inuu si saani ah oo aan turxaan lahayn uu u shaqeynayaan qorshayaasha iska kabaya ee a) Farmajo oo raba inaan doorasho la qaban, b) kan RW Rooble oo ah inuu sii ahaado RW waayo haddii doorasho la qabto ma sii ahaan doono RW iyo c) kan beesha Caalamka oo ah inuusan dalkn weligiis qas ka bixin oo markii uu hal tallaabo horay u qaadaba ay seddex taallbo ku kaalmeeyaan inuu dib u qaado. Somaliya waa taas ciddii ku farxi lahayd iyo ciddii ka nixi lahayd.